ဧရာဝတီကို ဘာကြောင့်များ ဖျက်ဆီးချင်ရတာလဲ ~ Nge Naing
ဧရာဝတီကို ဘာကြောင့်များ ဖျက်ဆီးချင်ရတာလဲ
Friday, August 05, 2011 Nge Naing 27 comments
"ဧရာဝတီမြစ်ကြီး တကယ်ပဲ ပျက်စီးသွားမှာပါလားလို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ အိပ်မက်ဆိုးကြီးတခုမက်ပြီး လန့်နိုးလာသူတယောက်လို ကျွန်မ တုန်လှုပ်ချောက်ချားစွာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်"
ကိုအောင်ဒင်ရေးတဲ့ ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ကြစို့ နှင့် ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြစို့ ဆိုတဲ့ ပို့စ်နှစ်ခုကို အခုမှ ဖတ်မိတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးရော မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပါ မသိခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတွေ အများကြီး သိလိုက်ရလို့ စာရေးသူ ကိုအောင်ဒင်နဲ့ တင်ပေးတဲ့ မိုးမခနဲ့ နေ့သစ်ဆိုက်ကို ကျေးဇူးအထူး တင်မိပါတယ်။ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်းအကြောင်းကို ကြားသိနေရပေမဲ့ ဒီလောက်အထိ မသိထားတော့ လူတွေအတွက်ရော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ ဒီလာက်အထိ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် အန္တရယ်ကြီးမားနိုင်တယ်လို့ မထင်ထားဘူး။ ပညာရှင်တွေက လေ့လာပြီး အန္တရယ်ရှိပါတယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြတာကို လက်မခံဘဲ ဘာကြောင့်များ ဧရာဝတီကို ဖျက်ဆီးချင်ရတယ်ဆိုတာ နားမလည်နိုင် ဖြစ်ရတယ်။ ဒီပို့စ်နှစ်ခုကို အခုမှ ဖတ်မိပြီး ဒီအရပ်ဝတ် ဒီမိုကရေစီဟန်ဆောင် စစ်အစိုးရရဲ့ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကြီးသာ အောင်မြင်သွားရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ အသက်သွေးကြောလည်းဖြစ် အလှကျက်သရေဆောင်လည်း ဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး တကယ်ပဲ ပျက်စီးသွားမှာပါလားလို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ အိပ်မက်ဆိုးကြီးတခုမက်ပြီး လန့်နိုးလာသူတယောက်လို ကျွန်မ တုန်လှုပ်ချောက်ချားစွာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ခံစားရတာကို ပို့စ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရေးချင်ပေမဲ့ ရေးဖို့အချိန်ကလည်း မရသေးတော့ ကိုအောင်ဒင်ရဲ့ ပို့စ်တွေကိုပဲ ပြန်လည်ဖေါ်ပြညွန်ပြပြီး ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ ဆိုတော်နှစ်ယောက်က ဧရာဝတီရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ အလှအပတွေကို စပ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကိုပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
မေခမေလိခမြစ်နှစ်ခုဆုံပြီး ဖြစ်လာတဲ့ ဧရာဝတီဟာ မြစ်ဆုံရေကာတာကြီး ဆောက်ပြီးရင်တော့ အခုပေါ်မှာ ထူးအိမ်သင်နဲ့ ခင်ဝမ်း စပ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းထဲက အလှကျက်သရေ ဂုဏ်ပုဒ်တွေမက ဧရာဝတီနဲ့ ဧရာဝတီကို အမြှီပုနေတဲ့ သက်ရှိသက်မဲ့တွေ ဘယ်လိုပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတာ တရုတ်နိုင်ငံက မြစ်ဝါမြစ်ကြီး ပျက်စီးသွားပုံနဲ့ ဥပမာပေးပြီး အောက်ကဆောင်းပါးနှစ်ပုဒ်မှာ စာရေးသူ ကိုအောင်ဒင်က အသေးစိတ် သုံးသပ်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက မြစ်ဝါမြစ်တစင်း ပျက်စီးသွားလည်း သူ့နိုင်ငံမှာ မြစ်ဝါမြစ်လို အသုံးဝင်တဲ့ တခြားမြစ်တွေ ရှိသေးလို့ တရုတ်နိုင်ငံကို သိသိသာသာ မထိခိုက်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဧရာဝတီပျက်စီးရင် ဧရာဝတီမြစ်ထက် ပိုပြီးအသုံးဝင်တဲ့မြစ် မရှိလို့ အဓိက နှလုံးသွေးကြောကို ပိတ်လိုက်တာနဲ့ တူတဲ့အတွက် ဘာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးနှစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ပြီး မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဧရာဝတီရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေတွေကို ရှုစားနားထောင် ဖတ်ရှုပြီး ဧရာဝတီကို မပျက်စီးအောင် အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း ကာကွယ်နိုင် ကယ်တင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ကြစို့ (အောင်ဒင်)
နေ့သစ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။ ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြစို့ကို မိုးမခမှာ တင်ထားတာကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted in: သီချင်း,ဆောင်းပါး,နိုးဆော်လွှာ
August 5, 2011 at 6:06 AM Reply
ပေမမှီ ဒေါက်မမှီ ဥာဏ်လေးနဲ့ လျှောက်ပြောပြန်ပြီ
August 5, 2011 at 8:36 AM Reply
ရေကာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပ်မသိဘူးလို့ ပြောထားပြီးဖြစ်လို့ ဉာဏ်မမီဘူးပြောလည်း ကျွန်မ ဘာမှ ဖြစ်မသွားဘူး။ ဒါဆိုရင် ဉာဏ်မီတဲ့သူရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီး ဆောင်းပါးရှင် ကိုအောင်ဒင်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်း ဉာဏ်မမီသေးဘူးထင်ရင် ဘာကအမှန် ဘာကအမှားဆိုတာ အချက်အလက်နဲ့ တိတိကျကျ ထောက်ပြပေးပါ။ ဒါဆိုရင် ကျေးဇူးတင်မယ်။ ဒီအတိုင်း ဘာမှမဆွေးနွေးဘဲ ပုတ်ခတ်ရုံ လာရေးလို့ကတော့ နောက်ထပ်လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။
August 6, 2011 at 4:25 PM Reply
ဒီလို ဆိုတော့လည်း အတော်ကို ကြောက်စရာ ကောင်းပါလားနော်.. ဒါကို လူထုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန်သိအောင် လုပ်ကြရပါမယ်။ တစ်မျိုးသားလုံး ဆန့် ကျင် ကန့် ကွက်ကြရပါမယ်.။ facebook မှာ ပြန်ဝေမျှချင် ပါတယ်။ ပြန်တင်ပေးတဲ့ အမကို ကျေးဇူးပါနော်။
August 6, 2011 at 8:56 PM Reply
ဒီပို့စ်အတွက် ပြောစရာ မရှိပါ .....မသိတဲ့သူ က မတတ်တဲ့ သူကို အကြံပေး .......နား မလည်တဲ့ သူ က အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်...... နေတဲ့ တိုင်းပြည် ဒီလိုပဲ သွားမှာ .....
August 6, 2011 at 9:16 PM Reply
August 6, 2011 at 9:48 PM Reply
((ဘယ်သူကိုမှအကျိုးမရှိတဲ့ဘလော့က်ပဲ)) TO ANONYMOUS: မင်းကရော ဘာတွေ အကျိုး ရှိအောင် လုပ်ခဲ့ ပြီ လည်း .....မင်းလို သားမျိုး မွေးရတဲ့အမေကတော့ မနှိုင်းရဲ စရာပဲ .....အမေတွေကို အားနာလို့ မင်းအမေကို မနှိုင်းတော့ဘူး.......
August 6, 2011 at 10:01 PM Reply
August 6, 2011 at 10:02 PM Reply
August 7, 2011 at 12:11 AM Reply
KKN ဆိုတာ ကိုကျော်နိုင်လား
ခင်များမိန်းမကို ထိတိုင်း အတင်းဝင်ကိုက်မနေနဲ.
August 7, 2011 at 1:23 AM Reply
Anonymous (August 6, 2011 4:25 PM) - ဒီပို့စ်ကို ကျွန်မ ရေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ပြန်ဖေါ်ပြရင် မူရင်းပို့စ်ပိုင်ရှင်နဲ့ ဆိုက်ကိုပဲ ညွန်းပေးပါ။
KKN - ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးတာ မဟုတ်ဘဲ အရေမရ အဖတ်မရ လူတကာ စိတ်မနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင် ပြဿနာလာရှာထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို အကုန်ဖျက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက် ဒီကောင်တွေကို အဖက်လုပ်ပြီး မလိုအပ်တာကို ပြန်မပြောပါနဲ့။ သူတို့က ယုတ်ညံ့တဲ့နေရာ၊ ယုတ်ရိုင်းစွာပြုမူ ပြောဆိုတဲ့နေရာ ကေက်ကျစ်တဲ့နေရာတွေမှာ နံပါတ် ၁ အမြဲယူထားပါတယ်။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့သူတွေကို သူတို့လို ယုတ်ညံ့အောင် စိတ်ရိုင်းဝင်အောင် လာပြီးသွေးဆောင်နေတဲ့သူတွေ၊ အကုသိုလ်တွေကို လာပြီးမျှဝေနေတဲ့သူတွေ ဖြစ်လို့ အကူးစက်မခံပါနဲ့။ သူတို့ကို မကောင်းတဲ့နေရာမှာ ဘယ်သူမှ ပြိုင်မနိုင်ဘူး၊ ဝေးဝေးက ရှောင်စေချင်တယ်။
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၁) says:
August 12, 2011 at 4:23 AM Reply
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၁)
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဧရာဝတီမြစ် ညာဘက်တွင် တည်ဆောက်နေသော ရေကာတာများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အခြားဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဆည်စီမံကိန်းများကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း မြစ်ကြောင်း ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ရေတိုက်စားမှုနှုန်း မြင့်မားခြင်း၊ ရေစီးအားနည်းခြင်း၊ စီမံကိန်း ဆောက်လုပ်ရာမှ ကျန်ရှိနိုင်သည့် ဓာတု ဓာတ်ပစ္စည်း များ ပိုမိုစုစည်းကာ ဆည်လွှတ်ရေတွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ကြောင်း “ဧရာဝတီ အတွက် ပန်ကြားချက်” အမည်ဖြင့် ကြာသပတေးနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“စနစ်ကျသော စီမံကိန်းများ ကင်းမဲ့မှု၊ ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှုနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ဗဟုသုတ အားနည်းခြင်းတို့သည် ပြဿနာပေါင်းစုံကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်” ဟုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ပန်ကြားလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၂) says:
August 12, 2011 at 4:25 AM Reply
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၂)
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်း အစပျိုးစဉ်ကပင် မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်က မိမိတုိ့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ် မြှင့်တင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု ကချင်အမျိုးသားတို့၏ ခံယူချက်များ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့သည်ဟုလည်း သူက သတိပေးထားသည်။
ရေအားလျှပ်စစ် မီဂါဝပ် ၃,၆ဝဝ ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မည့် “မြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်း” အရ မေခမြစ် အပိုင်းတွင် တာ ၅ ခု၊ မလိခမြစ်မှာ ၂ ခု ပိတ်ရမည် ဖြစ်သည်ဟု ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်ရေး လှုပ်ရှားသူများက ပြောသည်။
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၃) says:
August 12, 2011 at 4:27 AM Reply
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၃)
ယင်းအပြင် စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရသည့် ရွာ ၆၃ ရွာနှင့် လူပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကျော်အတွက်လည်း ပြန်လည် နေရာချထားပေးရန် လိုအပ်နေသည်။
“မေခ၊ မလိခမြစ်ဆုံနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ၌ ရေကာတာများ ဆောက်လုပ်ရန် ရှေ့တိုး ဆောက်ရွက်နေခြင်းဟာ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အမြင်ကို လျစ်လျူရှု ပစ်ပယ်ထားသည့် နောက်ဆုံး သာဓကတခု ဖြစ်တယ်” ဟု ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်ဒေသများ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လမာဂွမ်ဖန်း (Lama Gumhpan) က မဇ္ဈိမနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းတခုတွင် ဖြေကြားခဲ့သည်။
မြစ်ဆုံဆည်ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်အထိ ဦးတည်သွားနိုင်သဖြင့် စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပါရန်နှင့် စစ်ဖြစ်ပါက မိမိတို့တွင် အပြစ်မရှိကြောင်းလည်း မြန်မာအစိုးရကို အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း KIO ဥက္ကဋ္ဌ လရော်ဇောင်းဟရား လက်မှတ်ထိုးကာ တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်းတောင်ထံ အိမ်ဖွင့်ပေးစာ တစောင်ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ပေးပို့ခဲ့သေးသည်။
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၄) says:
August 12, 2011 at 4:28 AM Reply
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၄)
အစိုးရဘက်က တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း အနီးရှိ KIA ယာယီစခန်းကို ဇွန်လ ၁၁ ရက် နောက်ဆုံးထား ဖယ်ရှားခိုင်းရာက ဇွန် ၁ဝ ရက်နေ့တွင် အစိုးရတပ်များနှင့် ကချင်တပ်များ တိုက်ခိုက်စတင်ဖြစ်ခဲ့ကြရာ ယခုထိ ပြေလည်မှု မရသေးပေ။
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၅) says:
August 12, 2011 at 4:29 AM Reply
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၅)
မြန်မာ-တရုတ် အစိုးရများ အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကျိုး မျှော်မြင်၍ အသက်အိုးအိမ်များကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်မည့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားလိုကြမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းနှင့် အမျိုးသားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ သဟဇာတဖြစ်ရေးကို ရှေ့ရှုလျက် သက်ဆိုင်သူ အားလုံးက စီမံကိန်းအား ပြန်လည် သုံးသပ်၍ မလိုအပ်သော အကျိုးဆက်များကို ရှောင်ရှားရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက် တိုက်တွန်းထားသည်။
စီမံကိန်းအတွက် တံတားများ တည်ဆောက်ရာ၌ ရေတိုက်စားခြင်းနှင့် သောင်ထွန်းခြင်း ပြဿနာများကို ထည့်သွင်း မစဉ်းစားခဲ့သည့် အတွက် ရေတိုက်စားခြင်းနှင့် သောင်ထွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ နွေရာသီတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုနှင့် သောက်သုံးရေ ခပ်ရန် ခက်ခဲမှုများ ဖြစ်နေခြင်းမှာ ဆယ်စုနှစ်များပင် ရှိခဲ့ပါပြီဟုလည်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ဆည်စီမံကိန်းများ အောက်ဖက် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း တလျောက်နေသူ “ပြည်သူတွေအတွက် ရေကြောင်း ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာရဖွယ် ရှိနေတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ကြောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက်အဖွဲ့ Burma Rivers Network ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ စိုင်းစိုင်းက မဇ္ဈိမနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း တခုတွင် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၆) says:
August 12, 2011 at 4:31 AM Reply
ဧရာဝတီအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ (၆)
မြစ်ဝှမ်းဒေသများတွင် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ တိုးပွားလာခြင်းနှင့် ရွှေတူးဖော်ခြင်းများကြောင့် ဧရာဝတီလင်းပိုင် အပါအဝင် ရှားပါးငါးမျိုးများ ရှင်သန်မှုကို ထိခိုက်ရကာ မြစ်ကို မှီခိုနေသူများအတွက် သောက်သုံးရေနှင့် အစားအစာအတွက်မှာ လုံခြုံကင်းမဲ့နေသည်။
ပို၍ အရေးကြီးသည့်ပြဿနာမှာ မြစ်ရေစီးအားနည်းပါးခြင်းကြောင့် မြစ်အောက်ပိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများ၌ ပင်လယ်ဆားငန်ရေ ဝင်ရောက်မှု ပိုမို ကျယ်ပြန်လာခြင်းကြောင့် ဆန်စပါး ထုတ်လုပ်မှု ထိခိုက်ကာ ဆန်အဓိက စားသုံးနေသည့် ပြည်သူတရပ်လုံးကို ထိခိုက်လာကြောင်းနှင့် ဆန်တင်ပို့မှုမှ ရရှိသည့် နိုင်ငံခြား ဝင်ငွေ ထိခိုက် ကျဆင်းမှုကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတိပေးထားသည်။
ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ဆက်စပ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားရေး၊ အတတ်ပညာနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာ အလုံးစုံကိုလည်း အားလုံး ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
August 20, 2011 at 2:17 PM Reply
Oh Yes! this project had been pushed back and forth by both sides for many (many) years. All lecturer, professors from YU Geology and Geography depts awear and try(and even bag) not to continue this plan for many many) years, eventually, it still happen, ruthless brainless government! If "YOU" all don't get up and punish them, then WHO will? GET out there and kill them one after another!
U MG says:
August 29, 2011 at 3:37 AM Reply
A very good blog I'd ever seen awesome, good job & I appreciated.
သမိုင်းဝင် အထင်ကရ နေရာတွေကို တန်ဖိုးထား ထိမ်းသိမ်း နေကြတဲ့အချိန်မှာ ဘာလို့ များ ဖျက်စီးချင်နေကြတာ ပါလိမ့်ရတနာပုံမင်းနေပြည်တော်ကို အသစ်ပြန်လုပ်လိုက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာ တွေလည်း ပျောက်ခဲ့ ပြီးပြီ ပုဂံဘုရား ကိုလည်းလုပ်နေကြတာပဲ ကိုယ့် ရဲ့ အရိုးအရာအမွေ အနှစ်ကို တန်ဖိုးထားဖို့စဉ်းစားပေးကြပါဦးဗျာ
September 11, 2011 at 12:21 AM Reply
ကုလသမမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာအစိုးရကို အရေးယူဖို့ တင်ပြရင် တရုတ်အစိုးရက "ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးသာ ဖြစ်တယ်၊ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးကို မထိခိုက်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ကုလသမမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက မြန်မာအစိုးရကို အရေးယူစရာ မလိုဘူး" ဆိုပြီး တရုတ်အစိုးရက ဗီတိုအာဏာ သုံးပေးအောင် မြန်မာစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ပထွေး တရုတ်တွေကို အုန်းပွဲ၊ ငှက်ပျောပွဲ နဲ့ ပင့်လာလို့ တရုတ်တွေက ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လုပ်ခွင့်ရနေတာပါ။
ပြီးတော့ တိုင်းပြည်ကို တရုတ်လက်ထဲ လက်သိပ်ထိုး ရောင်းစားတဲ့ ပရောဂျက်တိုင်းမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက အချီကြီး ပွတော့ ရောင်းစားလို့ ရတာ အားလုံးကို တရုတ်တွေကို ရောင်းတော့တာပေါ့။
တရုတ်တွေက ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လုပ်ခွင့်ရနေတာတွေ အားလုံးရဲ့ တရားခံ အစစ်အမှန်ဟာလဲ မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခ အားလုံးလိုလိုရဲ့ တရားခံ ဖြစ်တဲ့ အရပ်သားအစိုးရ အမည်ခံ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်သားနဲ့ လုပ်တဲ့ ပုဆိန်ရိုး မပါတဲ့ ပုဆိန်ကို သစ်ပင်တွေက ကြောက်စရာ မလိုဘူး။ သစ်သားနဲ့ လုပ်တဲ့ ပုဆိန်ရိုး တပ်ထားပြီးတဲ့ ပုဆိန်ကိုတော့ သစ်ပင်တွေက ကြောက်ရပြီပေါ့။
အတွင်းလူ (ပုဆိန်ရိုး) မပါတဲ့ ပြင်ပရန်သူကို သိပ် ကြောက်စရာ မလိုဘူး။ အတွင်းလူ (ပုဆိန်ရိုး) ပါလာပြီ ဆိုရင်တော့ အဲဒီ ပြင်ပရန်သူဟာ အင်မတန် ကြောက်ရပြီပေါ့။
ဒီတော့ တရုတ်အားကိုး၊ ပုဆိန်ရိုး တွေ ဖြစ်တဲ့ အရပ်သားအစိးရ အမည်ခံ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးကို အမြစ်ပြုတ်အောင် ဖြုတ်ချပစ်ဖို့ ဆိုတာ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန် ဖြစ်နေပါပြီ။
September 17, 2011 at 2:21 PM Reply
မြန်မာ့မြေမှာနေ၊ မြန်မာ့ရေ သောက်နေကြတဲ့ တရုတ်တွေ
မြစ်ဆုံကိစ္စ ဝိုင်းတားပေးလဲ တရုတ်အစိုးရက ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး..
အဓိက လုပ်ရမှာက မြန်မာစစ်အုပ်စုကို လူထုအင်အားကို ဆထက်ထမ်းပိုး ပို ပြပြီး မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို မရပ်ရင် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်ဘဲ သူတို့ အာဏာလက်လွတ်သွားနိုင်မယ့် အလားအလာ များလာနိုင်တာကို စိုးရိမ်ပြီး လူထုဆန္ဒကို မဆန့်ကျင်ရဲအောင် ဖိအားပေးရမယ်..
စစ်အုပ်စုကို ထိရောက်တဲ့ ဖိအားပေးနိုင်အောင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အားလုံး လူထုစည်းရုံးရေးကို ထိရောက်အောင် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရမယ်..
ပြည်ပက ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပြည်တွင်းက အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကို ဧရာဝတီကို အသေသတ်မယ့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အကြောင်း နဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ဓါတ်ပုံတွေကို အခုထက် ပိုအားစိုက်ပြီး ဖြန့်ပေးကြပါ..
၁၉၈၈၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးကို သတိရကြ..
၂ဝ၁၂၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးကို ဖန်တီးကြ..
တရုတ်အားကိုး၊ ပုဆိန်ရိုး စစ်ခွေးအစိုးရကို ဖြုတ်ချကြ..
September 17, 2011 at 10:27 PM Reply
ပြည်သူအားလုံး လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ကြစို့
ဟူကျင်းတောင် မှ သိန်းစိန် သို့ သဝဏ်လွှာ
"မြစ်ဆုံဆည် ရပ်လိုက်ပါပြီ" ဆိုပီး ဘီမာပြည်က လူတွေကို နင် လိမ်နေဒဲ့ ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် အကွက် တိပ် ကောင်းတယ်
ဝ တို့လဲ ဝ တို့ စီလုတ်ပြည်က လူတွေကို အဲတီလို နည်းတွေနဲ့ လိမ်ပီး လုပ်စားလာတာဘဲ
ငြိမ်းချမ်းရေးစာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်ကြားလွှာ (၃) says:
ငြိမ်းချမ်းရေးစာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်ကြားလွှာ (၄) says:
January 7, 2014 at 12:53 PM Reply
ငြိမ်းချမ်းရေးစာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်ကြားလွှာ (၄)
March 28, 2014 at 3:20 PM Reply